» बजार पुँजीकरण जीडीपी बराबर पुग्दै, सबल भएकै हो सेयर बजार ?
बजार पुँजीकरण जीडीपी बराबर पुग्दै, सबल भएकै हो सेयर बजार ?
२०७७ चैत्र २६, बिहीबार १९:१४
काठमाडौं । लगातारको वृद्धिपछि नेप्से नयाँ उचाइमा पुग्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजार पूँजीकरणमा परेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार बिहीबारको कारोवारपछि बजार पूँजीकरण रु ३७ खर्ब पुगेको छ । यो नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को हाराहारी हो ।